kuphakama izimo ezicindezelayo abantu abaningi. Kule ngokuvamile kakhulu ukuthuthukisa neurosis, tachycardia, ukuqwasha kanye nezinye izifo. Ukuvimbela lokhu isimo, odokotela batusa sedatives ukuthatha noma okuthiwa sedatives.
Bahlanganisa izidakamizwa "Korvaltab" Ethandwa kakhulu izidakamizwa ezinjalo. Izinkomba for ukusetshenziswa ithuluzi izokwethulwa ngemva kwesikhashana. Uyofunda ngalokho umthamo imithi kadokotela, wathi kangakanani kuwufanele, uma kuye kwadingeka yini imiphumela emibi kanye contraindications.
Ukwakheka, incazelo, Ukwakheka kanye Okufakiwe
Izidakamizwa "Korvaltab" manual equkethe ulwazi olufanele ezikhishwe ngesimo round, amaphilisi ayisicaba bevelled, ezimhlophe, siphethe iphunga othize kanye nezimagqabhagqabha.
Izithako ezisebenzayo zomuthi yilezi: alpha-ETHYL bromizovalerianovoy acid, uwoyela peppermint futhi phenobarbital. izingxenye Njengoba ezengeziwe asetshenziswa SSC, amazambane isitashi, beta-cyclodextrin, magnesium stearate futhi monohydrate-lactose.
"Korvaltab" Tablets imakethwa e ibhamuza kanye amakhadibhodi amabhokisi, ngokulandelana (izingcezu 100 noma 20).
kanjani "Korvaltab" ithebhulethi? Ukusetshenziswa kwalesi imithi kunomphumela opholile. Inqubo ukulungiselela kwenza kube lula ukuzumeka futhi kunciphisa excitability we isimiso sezinzwa esiyinhloko.
Sine futhi isenzo antispasmodic yalesi izidakamizwa kufana umphumela akhiphe valerian. Lapho ebulilini-alpha bromizovalerianovoy acid ekwakhiweni ziphephile engavezwanga ngamazwi umphumela okuyiluthayo.
Ngemithamo emincane, it has a vasodilating futhi isenzo sine.
Kufanele kuphawulwe ukuthi sibonga uwoyela Mint kuthathwa njengesibikezelo esiyiso vasodilator imithi nemiphumela antispasmodic.
Izidakamizwa "Korvaltab", intengo zazo laloku lokubhalwe lapha ngentasi, ezinqunyiwe:
ukwethuka ukucasuka ngezibonakaliso;
zibe yenhliziyo (ill kuchazwa);
nomfutho wegazi ophezulu (e usaqala yentuthuko);
zibe of pheshana emathunjini, eyayibonakala senziwa kahle uhlelo autonomic.
Izimo ukusetshenziswa kwezidakamizwa
Nomuthi "Korvaltab", lapho kunikezwa umyalo ngezansi, is contraindicated ku:
Hypersensitivity ukuze imibuso eyakha lo amaphilisi;
pathologies izinso futhi isibindi esigabeni esindayo;
Tablets "Korvaltab": imiyalelo yokuthola
Thatha kubhekwa indlela yokudla.
Sithathe ngemithamo nsuku zonke zomuthi, kanye ukunquma isikhathi sokwelashwa kufanele kuphela kube kudokotela onolwazi oluthé ngesisekelo cwaningo futhi isimo jikelele isiguli.
Ngaphansi ulimi, lo muthi engamenzi. Uphuzwe ngomlomo, amanzi okuphuza plain.
Ngokusho imfundo, abadala (sifikile engu-18 ubudala) izimali iqondiswa e isamba 1-2 amaphilisi kabili noma kathathu ngosuku. Phakathi ekuphathweni izidakamizwa kuyinto efiselekayo ukwenza amakhefu efanayo.
Lapho ekwelapheni tachycardia, futhi ukwelashwa of vasospasms yenhliziyo Isikali alahlwayo zingandiswa amaphilisi amathathu.
izigameko ezingezinhle ezavela
Iziphi izinkinga zokwelashwa kungabangela, sine "Korvaltab"? Umhlahlandlela ibika ukuthi lokhu imithi ngokuvamile ibekezelelwe kahle impela. Nokho, abanye abantu kokuthatha lesi ejenti kungase kube nomthelela ekuthuthukiseni ukozela emini, ukuqunjelwa, isiyezi, oluncane, futhi iguliswa isikhumba ukusabela.
Ngokusho kochwepheshe, izenzakalo ezinjalo ziyathandeka alusilo unomphela futhi ngokuvamile zinyamalale nge imithamo ngincipha. Futhi, akuvamile okudinga ukuqedwa yesikhashana iphilisi.
Akunakwenzeka ukuba uqaphele yokuthi ukusetshenziswa ebulilini zomuthi enkathini ende ezigulini ukubonwa bromism ukuthuthukiswa.
Khona Ngengozi phezu-umthamo izidakamizwa kubhekwa isiguli ngcono ukukhathala, ukozela ngokweqile, kanye umuzwa onamandla inzululwane. Kulokhu, isisulu kuboniswa lavage esiswini kanye therapy okunezimpawu.
Oluvumelana nge neminye imithi
Ukuhlanganisa kusho izidakamizwa kanye namanye amanxusa kufanele niqaphele kakhulu, njengoba kungabangela ukuthuthukiswa ukusabela engadingeki.
Ngesikhathi esifanayo ephethe izibhebhe "Korvaltab" nezinye izidakamizwa ezithinta isimiso sezinzwa esiyinhloko ezicindezelayo, zamazwe amabili ukuthuthukisa nomphumela oqabulayo kungabonakala nasemkhakheni.
Isenzo yalesi izidakamizwa lapho co-zinikwa utshwala, futhi valproic acid kakhulu kwandisa.
Ukuthola nomuthi "Korvaltab 'kungaba attenuate imithelela glucocorticoids," Griseofulvin "ukulungiswa coumarin nemikhiqizo kanye nezindlela zokuvimbela ukukhulelwa ngomlomo, kodwa futhi kwandisa ubuthi umenzeli ezifana" MTX ".
Phakathi ukwelashwa nge "Korvaltab" it is hhayi Kunconywa ukushayela izimoto, kanye ukwenza imisebenzi ehlobene ijubane lengqondo ukusabela.
Ngaphezu kwalokho, lokhu izidakamizwa akuvunyelwe ukuhlanganisa ethanol futhi babela it kwabesifazane abakhulelwe, izingane nabancelisayo. Futhi kusho ayikwazi Kunconywa iziguli ukungabekezelelani ukuba ne-lactose ne-galactose. Lokhu kungenxa yokuthi ekwakhiweni kubhekwe kuhlanganisa ne-lactose.
ukudayiswa, isitoreji kanye eshalofini yokuphila
Tablets "Korvaltab" zingathengwa ngaphandle udokotela. Amazinga yokugcina kumele singeqi degrees 25.
Ukulungiswa kufanelekile ukusetshenziswa ngaphakathi umoya zeminyaka kusukela ngosuku ukukhiqizwa.
Izidakamizwa "Korvaltab": intengo kanye analogue
Ukungabekezeleli ithuluzi, kanye contraindications kokuthola odokotela bakhe ukweluleka iziguli zabo ezifanayo isimiso izidakamizwa. Lezi analogs zihlanganisa imithi ezilandelayo: "Korvalkaps", "Barboval", "Valekard", "Valocordin", "Korvaldin". Lezi zimali kungaba imithamo futhi side effects ezahlukene kakhulu. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthatha kwabo, qiniseka ufunde imiyalelo.
Njengoba ngentengo ke kubhekwa izidakamizwa akusilo eliphezulu kakhulu. Thenga amaphilisi 20 unga ruble 60-80.
Nobufakazi mayelana imithi
Cishe zonke izibuyekezo oluthunyelwe iziguli emva nokuphathwa kwezimali, akhayo. Bayabika ukuthi lokhu izidakamizwa iphumelela kakhulu futhi kulula ukuba bakwazi ukubhekana nezinkinga imisebenzi.
Ngeke behluleka ukujabulisa, kanye neqiniso lokuthi edonsa le umuthi kakhulu izimbangela ezingavamile ukusabela ezingezinhle. Uma izigameko ezingezinhle ezavela namanje uvele ke, njengoba umthetho, bona zingezesikhashana futhi asidingi ukuqedwa ukwelashwa.
Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke inzuzo "Korvaltab" amaphilisi kuyinto izindleko zabo iphansana, kanye ifomu umthamo. Kanye efanayo izidakamizwa isenzo (isb, njengokuthi "Barboval" futhi "Valocordin"), okuyinto akhiqizwa uhlobo amaconsi, lo nomuthi kulula ukusebenzisa.
Izidakamizwa "Chondroxide" (ijeli)
Cream-wax 'uphilile "kusukela hemorrhoids: izibuyekezo odokotela
Yini ukushintsha iziteshi?
Mousse izinwele kubenza esilalelayo.